Global Aawaj | बाढीपहिराको जोखिममा जलविद्युत् आयोजना, यसो गरे जोगाउन सकिन्छ ! बाढीपहिराको जोखिममा जलविद्युत् आयोजना, यसो गरे जोगाउन सकिन्छ !
बाढीपहिराको जोखिममा जलविद्युत् आयोजना, यसो गरे जोगाउन सकिन्छ !
५ असार २०७८ 3:35 pm
उनका अनुसार मादी नदीमा आएको बाढीले निर्माणाधीन आयोजनाको हेडबक्स, पावरहाउस, कामदार आवास एरियालगायत स्थानमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । यस्तै लोडर, एक्साभेटर, पेनस्टक पाइप, कर्सर प्लान्ट, आरएमसी प्लान्ट, हेभी जेनेरेटरलगायत पावरहाउस क्षेत्रबाट निर्माण सामग्रीसमेत बगाएको छ ।
तामाकोशी नदीमा नै ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । बाढीका कारण दोर्दी करिडोरमा निर्माणमा रहेका आयोजनामध्ये केहीमा सामान्य क्षति पुर्‍याएको छ । बाढीका कारण दोर्दी करिडोरमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजना क्षति पुगेको छ । कूल ५४ मेगावाट क्षमताको सुपर दोर्दी (ख), १२ मेगावाट क्षमताको दोर्दी १ मा बाढीले समस्या पारेको छ । रसुवामा निर्माण भइरहेको रसुवागढी आयोजनाको टेलरेसबाट बाढी पसेको छ । बाढीले आयोजनामा आवतजावतका लागि निर्माण गरिएको बेलीब्रिज बगाएको छ ।
मेलम्चीमा आएको बाढीले पुर्‍याएको जनधनको क्षति असाध्यै ठूलो छ । वातावरण विज्ञानको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएका रविन निरौलाका अनुसार कमजोर भूसतहमा सामान्य पहिरो जाँदा पनि तल्लो तटमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।
यस्तो विषम अवस्थामा हाम्रा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा कुन विषयलाई बढी ध्यान दिनुपर्ला त भन्ने राससको जिज्ञासामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनीयरिङका प्रबन्ध सञ्चालक माधव कोइराला भन्छन्, “हामीले विशेषगरी खोलाको अवस्थालाई ख्याल गरेर मात्रै निर्माणका काम अगाडि बढाउनुपर्छ ।” उनका अनुसार हामीले कस्तो संरचना बनाउँदैछौँ, त्यहाँको भूगोल कस्तो छ भन्ने जस्ता विषयमा मिहीन अध्ययनको जरुरी देखिएको छ ।
चिलिमे जलविद्युत् आयोजनादेखि नेपाल चीन सीमा क्षेत्र नजीक निर्माण भइरहेको १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी आयोजनाको समेत प्रमुख भएर काम गरिसकेका कोइरालाको विचारमा “सही स्थानमा सही संरचना ९राइट प्लेस, राइट स्ट्रकचर०” हुनु आवश्यक छ ।
परियोजनाको छनोटदेखि नै भौगर्भिक रुपमा जोखिमम छन् वा छैनन् विषयमा राम्रो खोज आवश्यक रहेको पछिल्ला दिनमा देखिएको बाढीपहिराले देखाएको कोइरालाको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, “हामीले अब इन्जिनीयरिङलाई पनि सोही अनुसार अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ, सही डिजाइन र मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन जरुरी देखिन्छ ।” एनइए इन्जिनीयरिङ कम्पनीले गरिरहेका कामलाई समेत अब थप गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने तथा जोखिम कम गर्नेतर्फ ध्यान दिने उनको भनाइ छ ।